Iqembu leCaps United Linqoba eleHow Mine Emdlaweni wePSL
Iqembu le CAPS United linqobe ele How Mine nge 1 ka nya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye Luveve komunye wemidlalo yangoLwesihlanu njalo ohlohlele iqembu le CAPS United ngu Dominic Chungwa.
UChungwa nguye umgadli oselitshayele kanengi emambuleni lonyaka njengoba eselamagoli alitshumi lanhlanu okutsho ukuba usesimeni esihle esokuphakamisa isicoco esiphiwa umgadli oyabe ehlohle kanengi ekupheleni komnyaka.
Umsekeli kamqeqetshi weqembu le CAPS United uMark Mathe uthe iqembu lakhe linqobe manayinayi njengoba beselithwele nzima ikakhulu ngehlandla lesibili.
Ngehlandla lesibili kube lobunzima ngoba besesingasagcini ibhora kuhle iHow Mine ingene njengeqembu ebelifuna ukuhlohla basivimbezela kweyethu ingxenye yenkundla. Into esiyithabelayo esiyenze kuhle yikuba senelisile ukuvikela isango lethu okuyinto esehluleka ukuyenza size sidlale labo eHarare baze basinqobe.
Komunye umdlalo oqhutshelwe enkundleni ye Barbourfields iqembu le Chicken Inn linqobe ele Tsholotsho nge 1 ka nya okutsho ukuba iqembu le Tsholotsho selibe liqembu lesibili ukugunyulwa kusigaba saphezulu lonyaka ndawonye leqembu le Bantu Rovers.
Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngoMgqibelo lapho iqembu le Yadah elizemukela khona ele Bulawayo City eNational Sports Stadium, iqembu le FC Platinum lizadibana lele ZPC Kariba ngase Mandava kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Shabanie Mine ngase Rufaro.
NgeSonto iqembu le Bantu Rovers lizangqikilana lele Ngezi Platinum Stars ngase Luveve, iqembu le Hwange lizadlala lele Highlanders ngase Colliery, ele Triangle lizemukela ele Harare City ngase Gibbo kuthi ele Dynamos lizadlala lele Chapungu ngase National Sports Stadium.